Ho an’ireo mainty sy indizeny ao Amerika Afovoany, Misy Vidiny Ny ain’ny Mainty (Black Lives Matter) · Global Voices teny Malagasy
Vondrona maro anatiny sy ivelany manandra-peo manohitra ny fanavakavahana
Voadika ny 10 Jona 2020 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Ελληνικά, Español, عربي, Română , 日本語, English
“Ametraho fanontaniana ilay fanavakavahana mifaka lalina ao anatinao” an'ilay artista Nikaragoaiàna ,Vero Garabatos tao amin'ny Facebook, nahazoana alàlana
Nasehon'ireo indizeny sy mainty hoditra tao Amerika Afovoany ny firaisan'izy ireo hina tety anaty aterineto noho ny namonoana an'i George Floyd, lehilahy iray mainty hoditra maty novonoin'ireo polisy efatra tao Minnesota, Etazonia. Any Amerika Afovoany, sarihan'ny vahoaka indizeny manam-piaviana afrikàna ny saina ho amin'ny hirifiry zakainy manokana vokatry ny fanavakavahana sy ny herisetra ataon'ireo mpitandro filaminana azy ireo, indrindra fa any amin'ireo fanjakana betsaka olona fotsy hoditra na safiotra, toa an'i Goatemalà, Hondirasy ary Nikaragoà.
Amin'ny ankapobeny, ireo mainty ao Amerika Afovoany — izay ny ankamaroany dia avy amin'ny vondrompiarahamonina Garifuna sy Creole — dia miaina any amin'ny faritry ny morontsiraka karaibiàna. Nandritry ny taonjato maro, anefa, zara raha misy ny fampiatiana azy ireny ho ao anatin'ny fiarahamonia ao Amerika Afovoany, rehefa tsy voahilikilika, araka ny lazain'ireo mpahay tantara. Ohatra, noràran'ny lalàna tsy hahazo hifindra monina mankany El Salvador ny mainty hoditra, teo anelanelan'ny 1933 sy ny 1980s.
Paul Joseph López Oro, mpianatra manomana ny diploama “doctorat” ao amin'ny Departemanta Fandalinana momba ny Afrikàna sy ireo Afrikàna any am-Pielezana, ao amin'ny Anjerimanontolon'i Texas, milaza fa ireo mainty hoditra ao Amerika Afovoany dia natao toy ny olona avy any an-tany hafa (vahiny) any amin'ireo firenena ao Amerika Afovoany izay mbola ny ‘mestizaje‘ — olona manana razambe avy amin'ny fotsy sy ny indizeny nifangaro — no mbola idealy matanjaka.
Hatramin'izao, vonoina, ilàna vaniny na alaina ny tanin'ireo olona mainty sy indizeny — izay matetika lohalaharana amin'ny ady fiarovana ny tontolo iainana. Manjaka amin'ireny heloka bevava ireny ny tsimatimanota.
Antso ho an'ny rariny avy ao anatiny sy any ivelany
Tamin'ny 30 May , ny filoha lefitra ao Costa Rica, Epsy Campbell Barr, dia nanameloka ny famonoana an'i George Floyd ary nangataka tamin'ny Kaomity ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Famongorana ny Fanavakavahana ara-Poko mba hamoaka tatitra manokana momba ireo endrika rehetra isehoan'ny fanavakavaham-bolonkoditra, fanilikilihana ara-poko, fankahalàna vahiny, fankahalàna ireo manam-piaviana afrikàna ary ny tsy fandeferana mifandraika amin'izany zakain'ireo teratany Afrikàna-Amerikàna. Nanohy nibitsika izy ho fanohanana ireo hetsipanoherana “Black Lives Matter” ao Etazonia.
Tsy afaka ny hangiana izahay ka ho mpiray tsikombakomba amin'ny tsy rariny, ny habibiana ary ny fangirifiriana. Maneho aho ny fiderako ireo olona rehetra izay manao diabe sy manasongadina ireo idealin'ny rariny, ny fitoviana ary ny fitiavana. #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterCR ??#GeorgeFloyd
Mbola ao Costa Rica ihany, nikarakara fihaonana tao amin'ny Zoom ny fikambanana iray Afro-CostaRikàna, feminista sady mpanohitra ny fanavakavahana “CostaRica Afro” mba ho fihetsehana hanoherana ny fanavakavahana eran'izao tontolo izao.
Maherin'ny 500 ireo olona nanao hetsipanoherana virtoaly tao Costa Rica hanoherana ny fanavakavahana eran'izao tontolo izao. Hetsika natomboky ny @CostaRicaAfro #BlackLivesMatter #BlackOutTuesday
Tao Goatemalà, teo anelanelan'ny 1960 sy 1996, niaretan'ireo vondrompiarahamonina indizeny ny fandripahana nataon'ny tafi-panjakana nandritra ireo hetsika fanoherana ny fihokoana. Nomarihan'ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ireo indizeny, Victoria Tauli-Corpuz, fa fanavakavahana ara-drafitra sy fanilikilihana ireo vahoaka indizeny no mianjady amin'i Goatemalà. Avy hatrany dia naneho ny firaisany hina amin'ireo hetsika mitranga ao Etazonia ireo vahoaka indizeny, ary manasa ireo Goatemalteky rehetra mba hisaintsaina momba ny fizotry ny fanavakavahana ao anatin'i Goatemalà.
Maya Kakchiquel, mpanao matoandahatsoratra no sady mpahay momba ny olombelona avy ao Goatemalà, sy Sandra Batz, nibitsika tamin'ny 27 May momba ny fahafatesan'i George Floyd.
Maty novonoina i George Floyd ary ny fanavakavahana no fototr'izay heloka bevava izay.
iainanay olona hafa volonkoditra ny fanararaotana sy ny tsimatimanota ataon'ireo fanjakàna mpanavakavaka, izay manome lamosina ny ainay fa tsy mba miaro anay.
Andro vitsy taorian'izay, nanaoratra i Batz tao anaty lahatsoratra iray fanehoankevitra izay miantomboka amin'ny hoe “mamono ny fanavakavahana,” tamin'ny filazàna fa:
Tena mora kokoa ny mahita ny fanavakavahan'ny hafa, izay atao any amin'ireo firenena hafa noho ny an'ny tena, izay ataon'ny firenen'ny tena ihany amin'ny vahoakany indizeny maro an'isa, izay atao tsinontsinona sy vonoina, eny, vonoina.
Sucely Puluc, indizeny avy amin'ny foko Maya K'iche’ sy Kaqchikel, dia naneho fa tiany mba hisy fiantraikany maharitra ireo hetsika manohitra ny fanavakavahana fa tsy ho fironana fotsiny ety anaty tambajotra.
“Nampangaintsika nandritra ny andro-mpiainantsika ny fanavakavahana. Tsy #fironana (#trend) fotsiny io.”
Ilay indizeny avy amin'ny foko Maya K'iche’ , mpiaro ny zon'olombelona, Andrea Ixchíu namorona saribe ho fanehoana firaisankina amin'ny Black Lives Matter.
Taokanto an'i Andrea Ixchíu, nahazoana alàlana.
Ny Garifuna ao Honduras, fifangaroana taranaka Afrikàna sy Amerindiana Arawak, dia miaina fanafihana tsy tapaka, araka ny lazain'ny fikambanana Garifuna mpiaro zo, OFRANEH. Ny Central American News nanangona angondrakitra:
Tao Honduras fotsiny, nisy 105 ireo hetsika mahery setra natao tamin'ireo vahoaka Garifuna teo anelanelan'ny 2008 sy 2019, isan'ireny ny famonoana, ny fandrahonana ara-pitsaràna, ny famindràna toerana an-terisetra, ny fanararaotana ara-nofo ary ny fanjavonana, araka ny tatitry ny OFRANEH. Izany hoe herisetra iray isambolana (0.8) ao anaty vondrompiarahamonina iray misy olona 43.111.
Io fikambanana io, tarihan'i Miriam Miranda, dia efa an-taona maro no nitaky ny hampitsaharana ny famonoana ireo vahoaka Garifuna. Nibitsika ihany koa i Miranda momba ireo zavamitranga ao Etazonia:
Angatahan'ny tanora ny hampitsaharana ireo habibiana atao amin'ny vahoaka mainty hoditra ao amin'izany firenena izany, ilay antsoina fa ‘ohatra ho an'ny demaokrasia”. Fanavakavahana, rafitra mpanjakazaka sy mpamono, izany no amidin-dry zareo manerana ny tany lazainy ho toerana mendrika honenana indrindra eto an-tany.